သက်ဝေ: ဘလော့ဂ်နှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်း
Posted by သက်ဝေ at 2:54 PM
JuneOne May 16, 2009 at 4:12 PM
ဇနိ May 16, 2009 at 5:08 PM
strike May 16, 2009 at 5:52 PM
စိတ်တွေကို ဆေးကုလို့ နေမကောင်းသေးလဲပြန်လာခဲ့လို့ရပါတယ်။
အောင်သာငယ် May 16, 2009 at 9:52 PM
ဘလော့ဂ်နဲ့ ဖြစ်တာပဲကွယ် ဖြစ်ပေါ့...း)
ဘလော်ဂါတွေနဲက မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲ...း)
ကလူသစ် May 16, 2009 at 10:54 PM
ဒီတယောက်လဲ ဘလော့ဂ်နဲ့ စိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီ
Anonymous May 17, 2009 at 12:06 AM
myo May 17, 2009 at 12:17 AM
ဘလော့ကိုအလည်လာတဲ့သူတွေနဲ့တော့ ရန်မဖြစ်ဘူး မဟုတ်လားဟင်..
sonata-cantata May 17, 2009 at 1:09 AM
ရန်ဖြစ်တဲ့ထဲ နာတို့ ပါဘူးနော်...
khin oo may May 17, 2009 at 1:49 AM
Hmoo May 17, 2009 at 2:02 AM
B4..I don't know about U R under medication.
I B pray4U :)
ကောင်းကင်ပြာ May 17, 2009 at 2:07 AM
tg.nwai May 17, 2009 at 3:08 AM
sin dan lar May 17, 2009 at 8:58 AM
မေငြိမ်း May 17, 2009 at 10:03 AM
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွယ်.. အေးရာအေးကြောင်းလုပ်ပါ.. အားတဲ့ အခါ တွေ့ကြမပေါ့လို့ တွေးပါဗျာ..။ နှုတ်ဆက်သူတွေများလို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့ ကြားထဲ...
သက်ဝေ May 17, 2009 at 11:17 AM
သူ့ကို ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်တာ မဟုတ်ပါဘူး...
သူ ကျွန်တော့်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်လွန်းလို့ ခဏလောက် စိတ်ကောက်ကြည့်တာပါလေ...
တကယ်တော့ သူ့ကို ကျွန်တော် တရက်မှ မခွဲနိုင်ပါဘူး...
(စာမရေးနိုင်တဲ့နေ့တွေများလာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်တိုရင်း သူ့ကို စိတ်တိုရင်း ရေးမိတာပါ... သူနဲ့ ဝေးနေလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ...)
အားပေးကြသူများ မှတ်ချက်များအာလုံးအတွက် ဝမ်းသာစွာ ကျေးဇူးတင်နေပါသည်...။
Moe Cho Thinn May 18, 2009 at 7:30 AM
ချိုသင်းလဲ စိတ်ကောက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ခဏလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ နည်းနည်းတော့ နေသာထိုင်သာ ရှိသွားမှာပဲ။
strike May 18, 2009 at 4:11 PM
တန်ခူး May 18, 2009 at 9:14 PM
သက်ဝေရေ… ခံစားချက်ခြင်းနဲနဲတူနေတယ်… တို့ ကတော့ စိတ်ကောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး… ဘယ်လိုပြောရမလဲ… စိတ်မပါတာ… စ်ိတ်တွေမပျော်တော့ သူ့ အနားမသွားချင်ဘူး… ရှုးးးးးးးးး…. သူမသိပါစေနဲ့ ကွယ်…
nu-san May 24, 2009 at 4:24 PM
မမသက်ဝေ.. စိတ်ကောက်ပြေတော့လေ.. :D